Ny maodely Prestashop tsara indrindra ho an'ny 2021 | Famoronana an-tserasera
Modely Prestashop tsara indrindra ho an'ny 2021
Raha manana orinasa an-tserasera ianao na hamorona eCommerce amin'ity taona ity dia ara-dalàna ny fiheveranao an'i Prestashop ho iray amin'ireo safidy anananao hananganana ny fivarotana an-tserasera eo ambanin'ity rafitra ity. Fa ny olana fotsiny dia tsy ampy. Ilaina ihany koa ny manome azy io amin'ny "akanjo", izany hoe miaraka amin'ireo maodelin'ny Prestashop izay mifanaraka amin'ny fomba tadiavinao hisehoan'ny tranonkalanao.
ankehitriny, Tsy sarotra ny mahita ny maodely Prestashop tsara indrindra; raha ny marina dia samy afaka mahita modely maimaim-poana ianao sy ireo karama hafa (amin'ny ambaratonga hafa). Saingy satria fantatray fa ny fananana safidy marobe dia mety hahagaga tokoa, anio dia te-hanangona izay tsara indrindra hitanao izahay ary izany dia ho an'ny fampiasana ankapobeny (izany hoe, afaka mifantoka amin'ny orinasa samihafa izy ireo. Te hahafantatra ve ianao hoe ireo izay atolotray?
1 Inona ilay Prestashop
1.1 Ary ny modely prestashop?
2 Inona no tokony ho ao an-tsaina rehefa mahazo modely Prestashop
2.1 Mitandrema amin'ny kinova Prestashop
2.2 Zahao ny demo demo
2.3 Modely amin'ny fiteny
2.4 Modely be mpampiasa
3 Modely Prestashop tsara indrindra
3.2 Transformer 4
3.5 Modely Prestashop: Optima
Inona ilay Prestashop
Dingana iray talohan'ny nahalalanao ny modely Prestashop dia ny fahalalana tsara izay tiantsika horesahina amin'ny Prestashop. Ny tiako holazaina dia, fantatrao ve izany?
Prestashop dia fitaovana, iray amin'ireo be mpampiasa sy malaza indrindra, mifantoka amin'ny fitantanana sy fitantanana fivarotana an-tserasera. Mety ho an'ireo eCommerce madinidinika sy antonony izany ary, alohan'ny anontanianao, eny, maimaim-poana izany ary rehefa mianatra mampiasa azy ianao dia mety amin'ny fitantanana ny tahiry, varotra sns. amin'ny fomba mora.
Raha ny marina, mifototra amin'ny angona misy, eto amin'izao tontolo izao dia misy fivarotana an-tserasera mihoatra ny 300.000 miaraka amin'ity fitaovana ity, ary ny fahazoana amin'ny fiteny 75 mahery dia manampy anao hianatra bebe kokoa.
Raha ny momba ny fiasany, dia malalaka izy io. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny ankamaroany, tsy milaza aminao rehetra, dia maimaim-poana, ka izany no mahatonga ny maro hisafidy ity fitaovana ity fa tsy safidy hafa (toa ny WordPress miaraka amin'ny WooCommerce).
Ary ny modely prestashop?
Ankehitriny, ny maodely Prestashop (na lohahevitra Prestashop) no tena hitan'ny mpampiasa amin'ny fivarotana an-tserasera. Izany hoe, ny endrika omenao ny fivarotanao. Ny akanjony, raha azo lazaina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ny maso izay hananan'ny magazanao, ny endrik'izy io rehefa misy olona tonga ao amin'ny pejinao ary mahita azy. Zava-dehibe ny fandehanany mifanaraka amin'ny lohahevitra na ny tsena iasanao. Ohatra, tsy tsara raha, raha manana fivarotana kilalao ianao, dia mametraka endrika kanto, amin'ny mainty sy tena mahonon-tena, satria tsy hahasarika ny sain'ny mpihaino anao izany.
Ireo modely ireo dia azo jerena amin'ny Internet ary manana endrika roa:
Maodely maimaim-poana Prestashop. Misy vitsivitsy ihany saingy manana ny fatiantoka izy ireo fa misy ny voafetra kokoa, na manolotra endrika fototra sy tsy dia manintona kokoa (ny sasany).
Modely Prestashop amin'ny fandoavam-bola. Misy karazany maro be koa ary samy hafa amin'ny an'ny hafa izy ireo noho izy ireo vita tsara kokoa ary manolotra zavatra betsaka kokoa noho ny volavola maimaim-poana.
Inona no tokony ho ao an-tsaina rehefa mahazo modely Prestashop
Alohan'ny hanehoana anao ny maodely Prestashop izay atolotray, tokony ho fantatrao inona no tokony ho ao an-tsaina rehefa mividy na misintona ary mametraka modely.
Ary indraindray, ny tsy fahombiazana na ny tsy fandehany tsara dia mety noho ny tsy fiheverana ireto manaraka ireto:
Mitandrema amin'ny kinova Prestashop
Alao sary an-tsaina hoe manana modely Prestashop tianao ianao. Fa rehefa tonga amin'ny fametrahana azy amin'ny eCommerce anao dia tsy mandeha izany. Mety hitranga izany satria tsy mifanaraka amin'ny kinova Prestashop anao.
Noho izany, rehefa mividy na misintona dia jereo hatrany raha mifanaraka amin'ny kinovan'ny Prestashop anao.
Zahao ny demo demo
Aza mijanona amin'ny sarin'io modely io ihany, raha misy ny demo, mijery izany ary hahitanao ny fomba isehoan'ny zava-drehetra, tsy ny pejy fandraisana ihany, fa ny rakitra momba ny vokatra, ny sokajy vokatra, manao ahoana ny fizotry ny fandoavam-bola sns.
Modely amin'ny fiteny
Araka ny efa nolazainay teo aloha, Prestashop dia nadika tamin'ny fiteny 75 mahery. Fa raha ny modely dia mety misy ny ampahany tsy adika, ary afangaro ny Espaniôla amin'ny Anglisy; na apetraka mivantana amin'ny teny anglisy.
Ka raha tsy tianao hitranga izany dia tokony ho azonao antoka fa voadika amin'ny teny espaniola ny zava-drehetra.
Modely be mpampiasa
Betsaka no tsy sahy mividy na misintona modely Prestashop izay efa be mpampiasa, satria mieritreritra izy ireo fa tsy ho original tahaka izany.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa, arakaraky ny fisintomana bebe kokoa, midika izany fa nanandrana azy ireo ny olona ary miasa izy ireo, fa tsy manome olana amin'ny ankapobeny. Ary izany dia hanome toky anao fa tsy hanana olana koa ianao.
Modely Prestashop tsara indrindra
Ankehitriny, avelanay ianao miaraka amin'ireo maodely Prestashop tsara indrindra azonao raisina ho an'ny eCommerce anao manokana.
Ity dia iray amin'ireo maodely Prestashop kanto indrindra izay ho hitanao ary miaraka a famolavolana mamaly (Midika izany fa ho tsara izy raha mijery azy amin'ny solosaina PC, tablety, finday ...).
Izy io dia manana demos 6 nomanina mialoha mba hahafahanao misafidy izay tianao. Ambonin'izany rehetra izany Mifantoka amin'ny fivarotana lamaody izy io fa azonao ampiasaina amin'ny hafa toy ny kilalao, firavaka sns.
Ity dia iray amin'ireo modely Prestashop be mpividy indrindra amin'ny Theme Forest, izay mahatonga ny olona maro hanandrana sy handresy lahatra an'io. Inona no ananany? Eny, manana tonian-dahatsoratra tena feno izy io, raha afaka mamolavola ny maodelinao manokana, ary koa ny fisian-tsary izay hamoronana ny atin'ny pejinao.
Izy io dia manana endrika efa voafaritra 17 sy ny mety hampidirana bilaogy.
Warehouse dia manana ny mampiavaka azy amin'ny mampifanaraka azy; izany hoe, misaotra ireo mody samihafa atolotray azy, afaka mamorona endrika anao manokana ianao amin'ny fanampiana anao amin'ny torohevitra azonao amin'ity modely ity. Ho fanampin'izay, nohamarinina ho an'ny SEO ary manana ny Plugin Revolution Revolution Slider maimaimpoana hamoronana sary tetezamita amin'ny pejin'ny eCommerce anao.
Mifantoka amin'ny magazay kely sy salantsalany, io dia iray amin'ireo modely Prestashop azonao atao amin'ny safidy maro. Ho an'ny vao manomboka, manana ianao Demo azo apetraka 7 (noho izany tsy mila manangana ilay magazay amin'ny rangotrao ianao). Saingy, raha izany dia manana Page Builder ianao hanamboatra ny modules ary hamolavola azy araka ny itiavanao azy (tsy fantatrao akory ny programa).
Modely Prestashop: Optima
Raha mila modely Prestashop ianao izay misy tanjona maromaro (ohatra satria manana magazay maromaro ianao na satria mbola tsy fantatrao izay ho tianao hivarotra) dia mety ho iray amin'ny fahombiazana indrindra io satria Mihoatra ny demôtô 47 mahery natao mialoha hamaly ny filan'ny orinasa isan-karazany, avy amin'ny lamaody, kojakoja amin'ny fiara, sakafo, boky ...
Izy io dia manana endrika mamaly ary azo ampiana fanitarana, avy amin'ny sora-baventy, slider, carousel amin'ny vokatra na sokajy, bilaogy ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Modely Prestashop tsara indrindra ho an'ny 2021